Maitiro Ekubvisa Cache pane Android Slow Smartphone? Pop ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Maitiro ekujekesa Android cache Inononoka smartphone? Kunyangwe paine kuvapo kwe Android smartphones kudhura akati wandei maeuro euros uye neakanaka kwazvo mahedhiyo, dzimwe nguva inobatsira yakajeka Android cache. Uku ndiko kushanda kune chinangwa chikuru chiri bvisa mafaera ese enguva pfupi akachengetedzwa nemaapplication pane yako Smartphone. Asati awana cMaitiro ekujekesa Android cache, ngatiedzei kunzwisisa kuti chii cache.
Maitiro ekujekesa iyo Android cache: Chii icho
La cache inoreva nzvimbo yekurangarira iyo inobvumidza mamwe maapplication kusevha kwenguva pfupi mafaera mune yako yekuchengetera mudziyo. Muchokwadi, maapplication akaita browser, mitambo, kuyerera masevhisi uye mamwe, chengeta imwe mhando ye mafaira mukati mefoni kuva nazvo nguva dzose. Nenzira iyi, pakutangisa kunotevera, iko kunyorera kunogona kutora ruzivo urwu nekukurumidza uye kutanga.
Naizvozvo, iyo Cache inosungirwa kuona nekukurumidza kuvhurwa kwemaapplication akachengetedzwa pane yako Android Smartphone, asi mukufamba kwenguva zvinogona kutungamira kune mamwe matambudziko. Ese aya mafaera enguva pfupi anogona kudzikisira yako Smartphone, kunyanya kana paine shoma yemukati nzvimbo inowanikwa.
Maitiro ekujekesa Android cache: painofanira kujekeswa
Iyo cache inofanirwa kujekeswa pazvinenge zvakakodzera kutora imwe nzvimbo yemukati. Imwe neimwe yakaiswa application inochengeta mafaera madiki mukati mefoni uye izvi zvinogona kutanga kutora yakawanda uye yakawanda nzvimbo nekufamba kwenguva. Empty cache saka hunyengeri kuvimba nenguva nenguva, paunoona kuwanda kweSmartphone kuderera uye kwete senzira yezuva nezuva.
Maitiro ekujekesa iyo Android cache: mutsauko ne "clear data"
Imwe neimwe yeApplication application inogona kusevha maviri marudzi emafaira mukati meSpartphone yako: cache mafaira y mafaira "chaiwo". Iyo yekutanga, sekuziva kwedu, yakagadzirirwa kuchengetedza diki ruzivo (browser nhoroondo, zvidiki zvidimbu zvemavhidhiyo, vhidhiyo zvigunwe, nezvimwewo) Kuti wedzera kushanda kwekutanga kumhanya; iyo yekupedzisira, kune rumwe rutivi, inoreva mafaera akakosha kuchishandiso.
Semuenzaniso, iyo data yakaiswa naSpotify pane yako Smartphone yekuchengetera kwemukati inosanganisira mushandisi marongero, dhatabhesi yekushandisa, ruzivo rwekupinda, uye zvimwe zvakawanda. Muchokwadi, kubviswa kweiyo data kunomanikidza chishandiso kune nyika chakanyatso kufanana neicho chekutanga kuvhurwa, uko pasina mafaira e cache uye isina data.
Maitiro ekujekesa Android cache
Kuchenesa Android cache kuri nyore. Paunenge uchinge uri mukati megadziriro dzefoni, iwe unofanirwa kutsvaga iyo panhare yekushandisa. Mukati iwe unowana rondedzero yeese magadzirirwo akaiswa parunhare, ese evatatu mapato akatorwa kubva kuGoogle Store, uye zvivakwa zveGoogle zvaunowana mukati meiyo Smartphone.
Paunenge iwe waona iyo app, ingo tapira pairi kuti uvhure ipaneru nyowani uko kune akasiyana ruzivo mukati. Muchokwadi, pamusoro pemabhatani ane hukama nemvumo yekushandisa (tsvaga kamera, chinzvimbo, maikorofoni, nezvimwewo), tinowana iyo "Self Storage". Nekudzvanya pairi iwe unowana chikamu icho chaunogona kujekesa cache kana kudzima iyo data.
Nekubata bhatani «Empty cache«, Iwe uchaona kuti bhatani rinozoita grey, kungokunyevera kuti kuvhiya kwabudirira.
Maitiro ekujekesa Android cache: yekupedzisira pfungwa
Sezvataona, kubvisa cache ndiko kushanda kunonzwisisika asi hakufanirwe kushungurudzwa. Kutaura zvazviri, hatimbofaniri kukanganwa izvozvo Cache chinhu chakakosha pamashandiro akakodzera ekushandisa, uye yakagadzirirwa Wedzera Speed kutanga zvakafanana. Kuenderera mberi kubvisa cache yekushandisa, pamwe nekushandisa mhinduro dzekunze, hapana chavanoita kunze kwekuvamanikidza kuti vatore mafaera madiki zvakare kuti vagadzire cache kubva pakutanga.
Kuchenesa Android cache chiito chinofanirwa kuitwa neimwe frequency chete kana iwe uine Android Smartphone ine diki yemukati nzvimbo. Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti parizvino Android haina nzira yakatenderwa yekukurumidza kujekesa cache. Anenge ese ma Smartphones ane imwe nzira yekubvisa cache, izvo zvinoita kuti oparesheni iwedzere kuomarara. Isu tinovimba kuti inotevera vhezheni yeApple ichasanganisira chikamu chekuchenesa icho chinojeka zvishoma uye chinowanikwa.